Mangina ary tadiavo ireo lahatsoratra tsara ?! | Martech Zone
Mangina ary tadiavo ireo lahatsoratra tsara ?!
Zoma, Aogositra 15, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia fanontaniana bebe kokoa ho an'ny fifanakalozan-kevitra fa tsy fanehoan-kevitra. Ny zavatra niainako tamin'ny fitorahana bilaogy dia ny tsy fitoviana no zava-drehetra. Raha manantena ny mpamaky hanana votoaty vaovao isan'andro ny mpamaky anao dia hiverina amin'ny tranokalanao isan'andro izy ireo hahazoana izany atiny izany. Ny fanontaniana tsara dia:
Impiry hiverina ny mpitsidika ny tranokalanao hijerena atiny vaovao alohan'izy ireo Mijanòna rehefa niverina?
Nanao andrana tato ho ato aho. Tsy dia fomba fiasa siantifika loatra no nataoko, fa rehefa nanoratra a lahatsoratra bilaogy ao amin'ny Starbucks izay nahazo fiheverana betsaka (A), nanapa-kevitra aho Avelao handeha hijery izay hitranga.
Fanamarihana iray mahaliana dia nalaza nandritra ny 72 ora (B) ny lahatsoratra taorian'ny nanoratana azy. Toa naharitra iray andro ny fandevonan'ireo olona ny atiny ary avy eo dia andro iray fanampiny hamaliana sy hanoratany izany ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Ity kosa dia namerina ny fifamoivoizana tao amin'ny tranokalako nandritra ny andro faharoa. Tamin'ny andro fahatelo (C) anefa, efa nihena ny fifantohana ary niverina tamin'ny ambaratonga mahazatra an'ireo mpitsidika isan'andro ny bilaogy (tsy anisany ireo mpanjifa RSS RSS 2,000).
Ny zava-misy fa niverina tamin'ny sehatra mahazatra ny bilaogy (mandra-pahatongan'ny Toned In Calculator debut) dia manondro ahy fa ny Digg or tafintohina ny fifamoivoizana, na dia mamporisika aza, dia tsy voatery ho ny fifamoivoizana izay harahiko. Ireo no tena mpizaka surf - mahita atiny mahaliana ao fa tsy miverina misimisy kokoa. Manaraka ireo olona niverina aho - ireo olona misoratra anarana amin'ny sakafoko, mitsidika tsy tapaka ary mandray anjara amin'ny adihevitra napetrako eto.
Amin'ny toe-java-misy mahazatra amin'ny haino aman-jery dia avelako hitohy ny buzz alohan'ny hanelingelenana azy amin'ny lahatsoratra vaovao sy lohahevitra vaovao. Ho nanohy nanandrana ny 'mitaingina onja' aho, angamba nanohy ny resaka tamin'ny lahatsoratra fanampiny 2 na 3 aza. Na izany aza dia mety hitazona ny isan'ny (B) vonjimaika mpitsidika izay nahita ahy 48 ka hatramin'ny 72 ora aorin'ilay paositra, nanapa-kevitra aho fa tokony hanohy hamoaka isan'andro - ho an'ny ahy fototra mpamaky (C) izay manohy miverina amin'ny bilaogiko.
Mora ny mitazona mpamaky noho ny mahazo mpamaky vaovao. Ny mitsambikina amin'io diggwagon io dia toy ny mifindra avy any amin'ny marathon mankany amin'ny sprint. Ny marathon dia manangana mpamaky fototra, mihetsika tsy tapaka sy fanahy iniana, mahafeno ny antenain'ny mpanjifanao fototra. Ny haingam-pandeha dia fihenam-bidy mandreraka ny hafa hifidy anao, hanoratra votoaty voatondrona, ary manandrana manangona antontam-bato vaovao mpamaky vonjimaika isan'andro. Azonao atao izany, saingy tsy azoko antoka na hahavita ilay hazakazaka ianao na tsia.
Tags: Analyticsmamitakavoajirikahullabalooanalytics mahombyfampiroboroboana pinterest
Izahay vs anao! Voahaja ve ianao?
Dingana 3 hiarovana ny bilaoginao amin'ny fitoriana goavambe sy matavy
Aug 15, 2008 amin'ny 10: 24 AM
Aug 16, 2008 amin'ny 6: 49 AM
4 Septambra 2008 à 5:00